यस्ता नौ गल्तीबाट बच्न आवश्यक - Nayapul Online
स्वास्थ्य विग्रनुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हात स्वयंको हुन्छ । खाने, सुत्ने र व्यायाम गर्ने समयको व्यावस्थापन गर्न नसक्दा कम उमेरमै हृदयघातजस्तो समस्याको शिकार हुनुपर्छ । मुटु रोग, स्ट्रोक जस्ता समस्याको जड हाम्रै खराव जीवनशैली हो । युवाहरुमा हृदयघातको समस्या हुने कारण यही हो । त्यसैले यस्ता नौ गल्तीबाट बच्न आवश्यक हुन्छ ।
मानिसहरु जन्मजातै खराब हुन्छन् ?
शंखरापुर नगर वडा स्तरिय फूटबल प्रतियोगिता मंसिर १४ देखि
घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? घर बनाउनु अघि थापा पाउनै पर्ने यी कुराहरुः